Coral Reef:9June
သက်ဝေ said on June 8, 2010 at 10:41 PM
May your dreams come true...........
sonata-cantata said on June 8, 2010 at 10:50 PM
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစား သုံးသပ်ထားတာတွေ သဘောကျမိတယ် မွေးနေ့ရှင်ရေ...
ပါးရမည့် အရာတွေ ပါး...ပါး...သွားပြီး၊
Shinlay said on June 8, 2010 at 11:34 PM
သာယာချမ်းမြေ့ တဲ့ ဘ၀လေးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
သုဒြေ္န said on June 9, 2010 at 12:06 AM
happy birth day ပါဇွန်ရေ ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီးတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအတွက် သာဓု သာ ဓု သာ ဓု ခေါ်ပါတယ် မပြုရသေးတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလဲစိတ်ရှိတဲ့ အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြုစုနိုင်ပါစေ ယနေ့ ကျရောက် သောမွေးနေ့ မှစ၍ နောင်လာမဲ့ မွေးနေ့ များစွာ စိတ်ရဲ့ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ရဲ့ ကျမ္မာခြင်း မဂလ်ာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့် စုံပါစေနော် သုဒြေ္န
အင်ကြင်းသန့် said on June 9, 2010 at 5:21 AM
ညကစောစောအိပ်သွားလို့ အခုမနက်မိုးလင်း အိပ်ရာက နိုးနိုးချင်း လာဆုတောင်းပါတယ်။ HAPPY BIRTHDAY ပါနော်....
ငါ့အစ်မ ဒီနေ့ဒီရက်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ နေထိုင်သွားနိုင်ပြီး ဘ၀တစ်လျှောက် လိုအင်ဆန္ဒဟူသမျှတို့လည်း တစ်လုံးတစ်ဝ ပြည့်စုံပါစေ....
အပြုံးပန်း said on June 9, 2010 at 6:04 AM
Happy birthday Moe Set!,
June လရောက်လာတော့ ညီမကို သတိယပါတယ်၊
မိုးခါး said on June 9, 2010 at 7:05 AM
ဒါကြောင့် ဇွန်လရဲ့ မိုးစက်လေး ဖြစ်နေတာကိုး ..း))
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် အစ်မ
ခုထက်ပိုပြီးလည်း အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ သာသနာပြုနိုင်မယ့် သူတယောက် ဖြစ်ပါစေ ..း))
ချစ်ကြည်အေး said on June 9, 2010 at 7:07 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ လေးပါ ညီမဇွန်ရေ :)
ဒီနေ့ဒီရက်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ လိုအင်ဆန္ဒဟူသမျှတို့လည်း တစ်လုံးတစ်ဝ ပြည့်စုံပါစေ....
Wunna said on June 9, 2010 at 9:15 AM
Wish you to have happy health, wealth and peace in incoming years.
ရေတမာ said on June 9, 2010 at 9:30 AM
Happy birthday ပါအမရေ review လေးသဘောကျတယ်။ ဒီထက်ပို ရင့်ကျက်၊ ဒီထက်ပို သာသနာပြုနိုင်ပါစေ
may said on June 9, 2010 at 9:38 AM
Happy Birthday June Moe Zat.
Sar kaung sar mon dawe ah myar gyi sat yay naing par say naw
noblemoe said on June 9, 2010 at 10:14 AM
HAPPY BIRTHDAY ပါ မမဇွန်
မမရည်မှန်းချက်တွေအမြန်ဆုံးပြည့်စုံအောင်မြင်ပြီး သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်နိုင်ပါစေရန်တောင်းဆုပြုပါတယ် မမရယ်...
ps: မမ မြန်မြန်ကျန်းမာပါစေ...
Mogok Thar said on June 9, 2010 at 1:21 PM
HAPPY BIRTHDAY to... ZMS...
HAPPY BIRTH...DAY.. to...... youuuuu...
ဖိုးစိန် said on June 9, 2010 at 8:13 PM
ဘာမှ မကျွေးလို့ မကျေနပ်ဘူး။
HAPPY BIRTHDAY MA MA JUNE !!!
ALL THE BEST WISHES... !!!
TZA said on June 9, 2010 at 10:41 PM
ဇွန်မိုးစက် said on June 10, 2010 at 8:19 AM
မိုးခါး said on June 10, 2010 at 8:28 AM
ကျေးဂျူးတင်ရင် မုန့်ကျွေးဘာာာ :P
အိန္ဒြာ said on June 10, 2010 at 10:12 PM
မွေးနေ့လက်ဆောင် အာဘွားးးးးးးးး)
Rita said on June 10, 2010 at 11:13 PM
fb မှာ မီလိုက်ပြီး ဒီမှာ မမီလိုက်ဘူး
ဇွန်နဲ့ ခင်ရတာ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကိုယ့်အတွက် ဝမ်းသာစရာ အဖြစ်ပါ။
မောင်မျိုး said on June 11, 2010 at 3:20 PM
ခုမှ စရောက်ဖူးတယ် မွေးနေ့ပို့စ်လေးနဲ့ တိုးနေလို့ ဟက်ပီးဘဒ်ဒေး ၀င်လုပ်သွားပါတယ် ။ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအမြဲပိုင်ဆိုင်နိူင်ပါစေဗျာ ။
ဇွန်မိုးစက် said on June 12, 2010 at 11:48 PM
နောက်ကျပေမယ့် မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးသွားကြတဲ့ မအိန္ဒြာ၊ ရီတာနဲ့ ကိုမျိုးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
Anonymous said on August 28, 2010 at 3:12 PM